Bogga Ciyaaraha, 27 February 2019
Fifa oo ganaaxday Chelsea
Xiriirka kubadda cagta dunida ee Fifa ayaa maanta ku dhawaaqay in kooxda Chelsea aysan wax ciyaartooy ah soo iibsan karin labada xilli ciyaareed ee soo socda.
Atletico Madrid oo garaacday Juventus
Kooxda Atletico Madrid ayaa hal lug la gashay wareega sideeda koox ee koobka Champions League kaddib marki ay xalay 2-0 ku garaacday kooxda Juventus.
Man City oo maquunisay Schalke
Gool uu daqiiqadi ugu danbeysay ciyaarta u saxiixay Raheem Sterlin ayay Manchester City uga badisay xalay kooxda Schalke oo ay ku dubatay 3-2, ciyaar ka tirsaneyd wareega 16-ka ee tartanka Yurub.
MBS oo la beeniyay in uu la wareegayo Manchester United
Dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salman ayaa la beeniyay in uu doonaayo in uu iibsado naadiga kubadda cagta ee Manchester United.
PSG oo Guul-darro biddey Manchester United
Naadiga PSG ee dalka Faransiiska ayaa laba gool iyo waxba kaga adkaaday naadiga Manchester United lugta koowaad kulan ka tirsan wareegga 16-aad ee Champions Leauge.
Man City oo 6 gool u dhiibtay Chelsea
Kooxda kubadda cagta Chelsea ee dalka Ingiriiska ayaa Axadi shalay kala kulantay dhigeeda Manchester City guuldarradi ugu xanuunka badneyd ee ay kala kulanto horyaalka koowaad ee dalka Ingiriiska, tan iyo sannadki 1991-ki.
Faah-faahinta horyaalka Spain ee La Liga
Kooxda Barcelona ayaa xalay barbarro goolal la’aan ah la gashay naadiga Athletic Bilbao, waana todobaadki labaad oo ay Barcelona ka keeneyso horyaalka La Liga barbardhac.
Barcelona iyo Real Madrid oo isku garab dhacay
Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo xalay isku arkay magaalada Barcelona, lugta koowaad ee wareega afarta koox ee tartanka Copa del Rey ayaa iskula agdhacay barbarro 1-1 ah.
Manchester City oo hogaanka qabatay
Kooxda difaacaneysa horyaalnimada Ingiriiska ee Manchester City ayaa dib ula wareegtay hogaanka Premier League kaddib marki ay shalay 2-0 ku garaacday Everton oo ay marti ugu aheyd garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool.
PSG oo gaartay semi-finalka French Cup
Dhanka Faransiiska, waxaa xalay dhacayo ciyaaro ka tirsanaa koobka French Cup.
Mourinho oo xukun xabsi lagu riday